Mienzaniso yeiyo itsva Apple Watch | Ndinobva mac
Mienzaniso yeiyo itsva Apple Watch
Isu tinoenderera mberi tichitsvaga maratidziro echigadzirwa chitsva chakapihwa neavo vanobva kuCupertino, iyo Apple Tarisa. Muchikamu chino tiri kuzokuratidza iwo matatu mapoka maacha kupihwa uye misiyano iripo pakati peumwe neumwe wavo. Tine mhando dzakasiyana dzezvinhu, hombe assortment ye "inochinjika" tambo, pamwe neakasiyana mapedzero eiyo huru casing.
Chatinofanira kujekesa ndechekuti Apple yakave nerumwe rudzi rwechinetso mukugadzirwa kwechigadzirwa ichi, sezvo tichiri kuzomirira kutanga kwa2015 kuti tiise maoko edu pairi. Mukati medzidziso dzatinofanira kufunga nezvadzo, isu tinogona kuratidza kuti maviri maviri akasiyana makristasi achaiswa pamusoro payo ingave iri Yekutanga kana Yekutsikisa chikamu kana, pane zvinopesana, iro rakareruka chikamu, Sport.
Kana paine chinhu chimwe chinoratidza Apple Watch, ndicho dhizaini uye zvigadzirwa zvekuvaka zvakaisvonaka. Tiri kutaura nezvekuti mune yepamusoro soro isu tinotova nekugadzirwa kwenyaya ine nhete yegoridhe rakasununguka gumi nesere, kungave yeyero kana yegoridhe yakasimuka. Kana ari makristasi anoshandiswa pachiratidziri, tinogona kutaura kuti makirasi maviri akasiyana achaunganidzwa. Imwe mhando ichave yesafiri kristaro iyo Apple inogona kutogadzira munzvimbo dzayo dzekugadzira kristaro uye kune rimwe divi, iyo inonzi Ion-X girazi, yakasimbiswa uye ine mwenje. Kumusana, uko masekonzi ebiometric aripo, zvedongo uye rinoumba zvave kushandiswa.
Mune Apple Watch Sport nhevedzano, hapana yesafiri kristaro yakashandiswa kuita kuti ireruke. Kune izvi ivo vakashandisa kuvhunduka uye kukwenya kusagadzikana aruminiyamu silicate girazi. Iyo inosimbiswa padanho remoreniyoni nekuchinjana kweion. Muchiitiko ichi, ioni diki dzinotsiviwa neidzo hombe kuti dzigadzire pakaomesesa pamusoro pegirazi.
Nezve mamodheru akaunzwa, tinogona kusiyanisa zvikamu zvitatu:
Yekutanga Apple Tarisa, ine akakwirira emabhanhire emhando uye akagadzirwa nesimbi alloys ane akasiyana magumo.
Apple Watch Sport, Ine micheka yesilicone uye muviri wealuminium kudzivirira matambudziko nedikita.
Shanduro yeApple Watch, Yakaputirwa ne18-karat yero kana yakasimuka goridhe.
Sezvauri kuona, une mikana yakawanda yekugadzirisa. Chinhu chekutanga iwe chaunofanira kujekesa nezvacho ukuru, 38mm kana 42mm. Zvino kupedzisa iwe kwaunoda, ingave sirivha isina simbi simbi, nzvimbo nhema nhema simbi, aruminiyamu, grey grey aluminium, yero goridhe kana 18 karat yakasimuka goridhe. Pakupedzisira iwe unofanirwa kusarudza tambo yaunoda kukwidza. Zvinosara kuti zvionekwe kana mabhande achizogona kutengwa zvakasiyana kuti akwanise kugadzirisa kutaridzika kweApple Watch yako nenzira yakapusa pasina kutenga michina mitsva.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mienzaniso yeiyo itsva Apple Watch
Dzidza nezve Hardware uye software yeiyo nyowani Apple Watch
Mitengo yepamutemo uye kuwanikwa kweiyo nyowani iPhone 6